राम्रो कुरा पच्दैन, नराम्रो कुरा जज्दैन – News Portal
राम्रो कुरा पच्दैन, नराम्रो कुरा जज्दैन
May 30, 2019 epradeshLeaveaComment on राम्रो कुरा पच्दैन, नराम्रो कुरा जज्दैन
समय हिजोको जस्तो सरल छैन । समय हिजोको जस्तो सहज छैन । समय हिजोको जस्तो सामान्य छैन । समय हिजोको जस्तो सकारात्मक छैन । समाज हिजोको जस्तो सभ्य छैन । समय हिजोको जस्तो उपयुक्त छैन । आजको समय अनेकौँ नकारात्मक उर्जाले भरिपूर्ण समय छ ।
कसैका लागि राम्रो कुरा गर्नु र सुनाउनु उसका लागि दुश्मन साबीत हुनु हो । सकारात्मक उर्जा हुने, सकारात्मक उर्जा दिने र सभ्य कुरा सिकाउनका लागि आजको समय फलामको चिउरा समान छ ।
एउटै व्यक्तिका लागि राम्रो कुरा सिकाउन एकदिन लाग्छ भने त्यहि व्यक्तिका लागि नराम्रो कुरा सिकाउन एक मिनेट पनि लाग्दैन । किनभने जति राम्रो कुरा गर्दा अमन र अपच लाग्छ त्यति नराम्रो कुरा गर्दा आनन्द र मज्जा लाग्छ ।
अमन र अपच लागेको कुरा सिक्ने र ग्रहण गर्ने कुनै चाहना हुन्न भने रमाईलो र मनोरञ्जन दिने कुरा सिक्न र सुन्न निकै ध्यान केन्द्रित हुन्छ । सिक्नेका लागि कस्तो अचम्म र सिकाउनेका लागि कस्तो अनौठो ? जुन कुरा नराम्रो र नकारात्मक छ, त्यो कुरा सिकाउनेका लागि प्रत्युपादक । तर सिक्नेका लागि ठीक यसको उल्टो हुने ।
नकारात्मक कुरा सिकाउन नहुने । राम्रो कुरा सिक्न नहुने । कति अप्ठ्यारो परिस्थिति ? यहाँ सिक्ने र सिकाउनेका लागि बडो गम्भीर मोड छ । सिक्नेले सकारात्मक सिक्दैन । सिकाउनेले सकारात्मक सिकाउन सक्दैन ।
अर्थात सिकाउनेले नकारात्मक सिकाउदैन । सिकाउनेका लागि नकारात्मक कुरा दुश्मन हो भने सिक्नेका लागि सकारात्मक कुरा दुश्मन हो । अब कसरी हामी गन्तव्यमा प्रवेश गर्छौँ ? सिक्नेले कस्तो कुरा सिक्ने हो र सिकाउनेले कस्तो कुरा सिकाउने हो ?
सिकाउने नराम्रो कुरामा ध्यानै दिन भएन र सिक्नेले राम्रो कुरामा मननै दिने भएन । आजको यो पछिल्लो समय यति जटिल बन्दैछ, जुन कुरा अनुमान गर्न गाह्रो र मुस्कील छ ।
स–साना बालबालिकादेखि लिएर ठूलैसम्मको सोच र विचार नै सकारात्मकभन्दा नकारात्मक कुराले भरिपूर्ण छ । सामान्य, सरल, सहज र सकारात्मक कुराप्रति कसैको ध्यान नै केन्द्रित छैन ।
जो असामान्य, जटील र नकारात्मक छ, त्यो प्रति सबैको ध्यान केन्द्रित छ । सुन्नेले यही चाहने । देख्ने यही चाहने, लेख्नेले यही चाहने । सबैका नजर–नजरमा यसैको बास छ । लाग्छ आजको युग नै नकाराम्क उर्जाले भरिएको उर्जा हो ।
हामीलाई गाउँघर, छरछिमेक तथा समाज यस्तो लाग्दैछ कि दोषपूर्ण को ? भन्नै गाह्रो छ । मानिस सामाजिक प्राणी हो । उसका लागि समाज चाहिन्छ । तर समाज कस्तो छ र समाज कतातिर छ ? भन्ने नै थाहा छैन ।
समाज बनाउने व्यक्तिले हो । तर यही व्यक्तिलाई थाहा छैन कि समाज कसरी बनाउने ? समाज बनाउने तरिका भए पनि उसले तरिका समाजमा प्रस्तुत गर्न सक्दैन । प्रस्तुत गर्ने हिम्मत गरिहाल्यो भनेपनि उसको आदर्श सुन्ने चासो र फुर्सद कसैलाई हुँदैन ।
समाजमा जान्नेको कमि छैन । समाजमा सुन्नेको कमि छैन । समाजमा बुझ्नेको कमि छैन । हरेक आफ्ना लागि प्रचुर र पर्याप्त छ । कसैले कसैलाई जान्दैन र कसैले कसैलाई मान्दैन । जाने पनि नजाने पनि ठूलो बन्ने परेको छ र ठूलो देख्नु नै परेको छ ।
जानेकालाई होच्याएर, खसाएर र गिराएर वा पछारेर किन नहोस् आफू माथि देखिनु नै प¥या छ । आफूले कति जानेको छ ? त्यो कुरा आफूलाई नै थाहा नहोला तर अर्काको दोहोला काट्नु नै प¥या छ । ज्ञान लिदा लाज हुने, ज्ञान दिदा अर्ति नपुग्ने । त्यसपछि के गर्ने ?
जसरी भएपनि ठूलै बन्नै परेन । कसैलाई जानेमाने स्वीकार्नु नै उपयुक्त लाग्दैन । कसैलाई आफूभन्दा महान भन्न र गन्न मन पर्दैन । अनि के गर्ने ? आज यसैको कारण राम्रो कुरा सबैलाई नपच्ने भयो । नराम्रो कुरा त त्यो कानुन सम्भत र आधिकारिक नै भएन ।
हामीले समाज कस्तो हुुनुपर्छ ? भनेर आफैले आफैलाई प्रश्न ग¥यौ भने, हामी आफै उत्तर दिन्छौ । ‘समाज सभ्य र भव्य हुनुपर्छ । समाज सभ्य हुने कसरी ? कसैले कसैलाई नटेरेर र कसैले कसैलाई सम्मान नगरेर सभ्य समाज बन्छ ?
आफू मात्र ठूलो बनेर समाज सभ्य र भव्य बन्छ ? समाज बनाउने कस्ले हो ? जुन व्यक्ति र शक्तिले सभ्य समाज बनाउने हो, ऊ व्यक्ति र शक्ति नै स्वयम् असभ्य र पाखे छ भने समाज सभ्य बन्छ कसरी ? समाजमा हरेकलाई आफ्ना कुरा सुनाउनको लागि हतार छ,
शक्तिबिना कुनै पनि कुरा सम्भव भन्ने कुराको पनि ज्ञान हुन नितान्त जरुरी छ । शक्तिबिना कुनै पनि कुरा सम्भव छैन् । त्यसैले सबैका लागि सकारात्मक उर्जा नै अपरिहार्य छ । मानिस दया त्यागेर निर्दयी बन्दैछ । मानिस माया त्यागेर घृणित बन्दैछ । मानिस करुणा त्यागेर पाषाण बन्दै छ । मानिस अहिंसा त्यागेर हिंस्रक बन्दै छ । आजको पछिल्लो सामयको निर्दयी, घृणित, पाषाण र हिंस्रकपन र व्यवहार नै नकारात्मक उर्जां हो । समाजलाई सभ्य हुनबाट पछि धकेल्ने नै यिनै कुरा हुन् ।
तर अर्काको कुरा सुन्न फुर्सद नै छैन । आफ्ना कुरा सुनाउन पाए दिन बितेको पनि थाहा नपाउने र अर्काको कुरा सुन्नुप¥यो भने किनेछ पनि दिन सरह हुने । यो प्रवृत्तिले आजको समाज जस्तो बन्नुपर्ने हो, त्यस्तै बन्छ ? पक्कै पनि बन्दैन ।
त्यसैले कुनैपनि व्यक्ति बन्न, परिवार बन्न, समाज बन्न वा सिङ्गोमुलुक बन्न राम्रो र सकारात्मक कुरालाई स्वीकार्नु पर्छ र ग्रहण गर्नुपर्छ । सकारात्मक उर्जाबिना कुनै कुरा सफल हुन सक्दैन ।
सकारात्मक सोंच, विचार र उर्जामा शक्ति हुन्छ भन्ने कुराको पनि ज्ञान हुन नितान्त जरुरी छ । शक्तिबिना कुनै पनि कुरा सम्भव भन्ने कुराको पनि ज्ञान हुन नितान्त जरुरी छ । शक्तिबिना कुनै पनि कुरा सम्भव छैन् ।
त्यसैले सबैका लागि सकारात्मक उर्जा नै अपरिहार्य छ । मानिस दया त्यागेर निर्दयी बन्दैछ । मानिस माया त्यागेर घृणित बन्दैछ । मानिस करुणा त्यागेर पाषाण बन्दै छ । मानिस अहिंसा त्यागेर हिंस्रक बन्दै छ ।
आजको पछिल्लो सामयको निर्दयी, घृणित, पाषाण र हिंस्रकपन र व्यवहार नै नकारात्मक उर्जां हो । समाजलाई सभ्य हुनबाट पछि धकेल्ने नै यिनै कुरा हुन् । दया, माया, करुणा र अहिंसा सभ्य समाजका चार खम्बा हुन् ।
यि चार खम्बा मध्ये एउटा कुनै पनि खम्बा पूर्ण छैन् र सम्पन्न छैन् भने त्यो सिंगो समाज बन्नै सक्दैन् । बनेपनि त्यो समाज भव्य र सभ्य बन्नै सक्दैन् ।
यि चारवटै कुरा भनेका राम्रो काम, राम्रो ज्ञान, राम्रो ध्यान, राम्रो कर्म, राम्रो संस्कारबाट उत्पन्न हुने हो । यसका लागि हामी सबै मानव प्राणी सकारात्मक सोंच र विचारको बन्नुप¥यो ।
सकारात्मक बन्नलाई कुनै खर्च पनि छैन् र लगानी पनि छैन् । केबल आफू र आफ्नो आत्मलाई परिवर्तन गर्नसके पुगिहाल्यो । सकारात्मक बन्नलाई कसैलाई केही दिनुपर्दैन् ।
केबल आफ्नो अन्तर हृदय र अन्तरआत्मले पवित्र व्यवहार र संस्कारको अवलम्बन गरे पुग्छ । एकदिन मन्दिर जाँदैमा सकारात्मक बनिदैन् । एकदिन स्नान गर्दैमा सकारात्मक बनिदैन् ।
एक दिन दानपुण्य गर्दैमा सकारात्मक बनिदैन् । सकारात्मक बन्नको लागि मन, बचन र कर्ममा शुद्धता हुनुप¥यो । मनले कसैलाई पनि कुभलो चिताउनुभएन । अनिमात्र बनिन्छ सकारात्मक ।
सकारात्मकले नै शक्तिको उत्पादन गर्दछ । शक्तिले नै दैनिकीलाई सहज र सरल बनाउँछ । हिजोको तुलनामा आज मानिस सर्वसम्पन्न छ । तथापि प्रश्न बडो जटिल र गम्भीर छ ।
हिजो सबथोकको अभाव हुँदा मानिस स्वस्थ, खुशी, सुखी, शान्त र दीर्घायु हुने तर आज सर्वसम्पन्न हुँदाहुँदै पनि दुखी, चिन्तित, आक्रान्त, अशान्त भयभियत, अस्वस्थ, अल्पायु किन हुने ?
यो सबै उर्जामा भर पर्ने कुरा रहेछ । हिजो मानिसमा कयौँ कुराको अभाव र असुविधा हुँदा हुँदै पनि सोच, चिन्तन, मनन् र विचार निकै धैर्यवान र सकारात्मक थियो ।
जसले गर्दा यावत कुराका अप्ठ्यारालाई पनि सरलतामा पु¥याउने शक्ति प्राप्त हुन्थ्यो, तर आज त्यो छैन् । सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि मानिसमा धैर्यता छैन् । संयमता छैन् ।
शान्त र चित्त एकाग्र छैन् । सन्तुष्टि छैन् । अर्थात् कुनै पक्षमा सकारात्मक भाव र सकारात्मक उर्जा नै छैन् । जसको फल आज निकै भयावहको स्थितिमा छ ।
सम्पन्नताको अगाडि मानिस दुखित हुनु भनेको कम चुनौतीको अवस्था हो ? हामीलाई विपन्नताले सुखी बनाउँछ र सम्पन्नताले दुखी बनाउँछ, भन्यौँ भने हामी ठीक हुन्छौँ तर अवस्था त ठिक त्यस्तै नै छ नि ?
जुन समयको कुरा गर्दा पनि आजको पुस्तालाई कथा कहानीजस्तो लाग्दछ । त्यतिबेला मानिस कति नम्र, भद्र, शान्त र शतजीवि थिए । आजको विकासको युग, आज वैज्ञानिक युग, आज भौतिकवादको युग,
आज सुखी र समृद्धिको युग, आज सूचना र सञ्चारको युग, आज प्रविधिको युग, आज यन्त्र र उपकरणको युग, आज नयाँ युग तर पनि हरकिसिमले आकूल र व्याकूलको अवस्था किन ?
मानिसले कुन शक्ति र संयन्त्र गुमायो । मानिसमा धैर्यता किन अटेन् ? मानिसमा संयमता किन टिकेन ? मानिसमा किन अहमता किन टुटेन ? मानिसमा बिलासिता किन हटेन ? मानिसमा विवेकशीलता किन पलाएन ?
मानिसमा अज्ञानता किन फुटेन ? मानिसमा अहंकारिता किन टुक्रिएन ? मानिसमा घमण्डीपना किन चर्केन ? जसका कारण आफूले आफैलाई रोगी, भोगी, शोकी, र दुखी बनाईरहेको छ ।
मानिस हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सी यो निराशा र दुखीमा परिणत हुने क्रम बढ्दै जानेछ । किनभने यसको तथ्यांक नै भयावह भएर तेर्सिदै छ । मानिसले आफूले आफैलाई जस्तो ठाने पनि र आजको युग र समयलाई जति परिवर्तित र नौलो मानेपनि मानिसमा हुनुपर्ने मानवीय गुण र
मानवीय शक्ति क्षिण हुँदै गइरहेको अवस्था छ । यदि मानव दानवमा परिवर्तन हुनु र मानवीय गुणबाट अमानवीय गुणमा परिवर्तन हुनुलाई ठूलो विकास र परिवर्तन ठान्ने हो भने ठिकै छ अन्यथा यो समय निकै नकारात्मक उर्जाले भरिएको दोषी समय बन्दै छ । यसलाई बेलैमा सचेत भएर सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट नसच्याउने हो भने समय निकै कष्टकर बन्नेवाला छ ।
प्राप्त सुविधा जति पनि छन् ति सबै आफैमा साध्य होइनन्, ति त केवल साधन मात्र हुन् । यि सबै साधनको विवेकपूर्ण ढंगले परिचालन गरिएन र प्रयोग गरिएन भने त्यसको शिकार हामी स्वयं नै बन्ने छौँ । त्यसैले साधन स्रोतको आपूर्तिलाई नियन्त्रणमा राख्दै आफू चल्न सकिएन र सकारात्मक बन्न सकिएन भने पछिल्लो युग काल युग हो ।
टोल–टोलमा योग सञ्चालन गरिने
आसन फेरियो शासन उस्तै
राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह
January 12, 2020 epradesh
अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसाविरूद्ध दिवस
November 24, 2019 epradesh
स्थानीय तहमा भ्रमण वर्ष
February 19, 2020 epradesh
कालिमाटीलाई ‘बिजुली खुशी’
तुलसीपुरमा साइकल धेरै चलाउनेलाई पुरस्कार
अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि होमस्टे
पुरन्धारा झरना विकासका लागि अन्तरक्रिया
सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासबारे छलफल
February 26, 2021 Bhuwan Gautam